भारतीयले अपमान गर्दा मनिषालाइ मिल्यो सिङ्गो नेपाल र नेपालीजन साथ – Etajakhabar
काठमाडौं । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले ट्वीट गरेपछि अहिले भारतमा त्यसले खैलाबैला मच्चाएको छ । उनको विरुद्धमा ठूला ठूला समाचार बनाएर प्रशारण गरिएको छ । भारतीयहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि मनिषाको विरोध गरिरहेका छन् । नेपालल् नयाँ नक्सा जारी गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लेखेको ट्वीटमा अभिनेत्री कोइरालाले समर्थ जनाएकी थिइन् ।
उनले त्यसमा समर्थन जनाउँदै अब कुटनितीक माध्यमवाट समस्या समाधान गर्न अपिल गरेकी थिइन् । सोही विषयले भारतीय मिडियामा खैलाबैला भएको हो । भारतीय मिडियाहरुले खेदो खनिरहेका बेला नेपालीहरुले उनको साथ र समर्थन रहने जनाएका छ्न् । सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरुले उनको समर्थनमा स्टटासहरु लेखेका छन् ।
उनले गरेको ट्वीटलाई लिएर नेपालीहरुले मनिषाको उच्च प्रसंशा गगरिएको छ । नेपालमा मनिषाको समर्थन भइरहँदा भारतीय ट्वीटर प्रयोगकर्तादेखि सञ्चारमाध्यमले उनीविरुद्ध विरोध जनाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आवश्यक कदम उठाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी थिइन्।
भारतमा कतिपय मिडियाहरु त चीनको इशारामा मनिषाले उक्त ट्वीट गरेको दाबी गरेको आरोप समेत लगाउँछन् । मनिषाको उक्त भनाइपछि सञ्चार माध्यममा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत जाइलागेका छन् । त्यतिमात्र नभएर मंगलवार संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस कडा भयो भन्ने प्रशंगमा पनि भारतीय मिडियाहरुले खण्डन गर्न थालेका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय।’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए। सोही ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै मनिषाले लेखेकी थिइन्,’हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा बढाएकोमा धन्यवाद। अब तीन महान देशबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ताको आशा गर्दछु।’
भारतीय टिभी च्यानल एबीपी न्यूजले त उनको ट्वीटलाई नै लिएर बनाएको समाचारमा निकै आपत्तीजनक कुरा भनिएको छ । उनलाई – भारतको नुन खाएर चीनको गीत गाउने ? जस्ता आरोप लगाइएको छ । अभिनेत्री कोइरालाले भने यि सब कुराको कुनै प्रतिकृया दिएकी छैनन् ।
भारतीय मिडियाहरुले विरोध जनाए पनि नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले भने मनिषाको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मनिषा कोरइरालाको साथमा भन्दै लेखेका छन् –
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको निर्णयका निम्ति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिदैं ट्वीट् गर्नुभएकी विख्यात नायिका मनिषा कोइरालाको भर्त्सना गर्ने भारतीय संचार जगतको रवैया खेदजनक छ ।
वलिउडकी स्थापित अभिनेत्रीले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित हुँदा खुशी र हर्षका साथ वास्तवमा आफ्नो सरकारलाई धन्यवाद दिनु शतप्रतिशत सही काम हो ।
भारतीय संचार माध्यम दुष्प्रचार, एकोहोरो खेदाइ र अतिरञ्जित सम्रेषणका लागि आफै विश्वस्तरमै बदनाम छन्, यसपटक फेरि एकपटक स्वयं उदाङ्गो भएको अवस्था मात्रै हो । तिनले विनासकारी भूकम्पका बेला नेपालको हुर्मत लिएर गरेको दुष्प्रचार नेपालीहरूले अझै बिर्सन सकेको पाइँदैन । यसखालको रोइलो प्रदर्शन नानीदेखि लागेको त्यस बानीकै नयाँ संस्करण मात्र हो ।
आफ्नो मातृभूमिको हक, हित र अधिकार अनि स्वाभिमानको पक्षमा उभिएर मनिषाजीले गरेको यो उल्लेखनीय सद्कर्म, राष्ट्रसेवा र देशभक्तिको अभिव्यक्ति हो । भारतीय सिने क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो सिंगो योग्यता र उर्वर जीवन लगानी गरेर हासिल गरेको लोकप्रियता र ख्याती सामान्य छैन ।
अहिलेको उहाँको बोली त्यही उचाइ सुहाउँदो, शिष्ट र सचेत छ । सिङ्गो नेपाल र नेपालीजन मनिषाको साथमा छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकी नातिनी रहनुको नाताले पनि मनिषाले आफ्नो सचेत, जागृत र राष्ट्रप्रतिको माया ममतालाई अटुट र अक्षुण राख्नै पर्दथ्यो, क्या बात ! धन्यवाद ।
भारतले गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस समयदेखि विवाद सिर्जना भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच भारतले लिपुलेकमा आफ्नो सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो ।
Posted on: Thursday, May 21, 2020 Time: 10:10:09